Dubai no toerana tsara indrindra hiatrika asa, ny fomba hahitana asa
Famerenana ny asa amin'ny 2018 Dubai City
Janoary 2, 2018
Janoary 7, 2018
navoakan'ny Dubai City Company at Janoary 6, 2018
Dubai no toerana tsara indrindra ho an'ny asa?
Dubai no tsara indrindra toerana ho an'ny asa ?. Fa maninona no nitranga ?. Raha ny zava-misy, Dubai dia iray amin'ny toerana tsara indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy misy fanontaniana apetraka, ny rehetra asany mpihaza mitady hametraka any Dubai. Ary eo ambonin'izany asa izany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia fomba tsara ho an'ny karama tsy mandoa hetra tsara indrindra. Nefa mba hahazoana ny asa ao Emirates. Mila miorina ao amin'ny toerana a Dinidinika momba ny asa any Dubai ny asa sy ny fomba hivarotana ny tenanao fitarihana feno.
Tena ivarotra ara-barotra ihany koa i Dubai. Betsaka ny mpanao politika, Mpianakavin'ny mpanjaka, ary raharaham-barotra tompony. Ity toerana mahavariana ity dia mametraka ny ankamaroany sy tsara indrindra tanàna kosmopolitiana ho an'ny vahiny mpila ravinahitra. Etsy ankilany, Dubai City dia fantatra fa ny tanàna manintona tsara indrindra ho an'ireo mpikaroka amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny fiainana ny tontolo arabo, ity toerana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra ary raha ny fiainana matihanina sy manokana. Ao afovoan-orinasan'ny Emirates dia azonao atao mahazo tolotra mahavariana asa avy amin'ny mpandraharaha.
Dubai no toerana tsara indrindra hanaovana asa any Emirates?
amin'ny maha- fanehoana ny hatsaran'ny Emirà. Io toerana io dia lasa 5th amin'ireo tanàna malaza manerantany. Ny hevi-dehibe iray hafa dia ity tanàna ity ho lasa haingana ny tena mitsidika indrindra ho an'ny mpanatanteraka tsara indrindra dia miasa. Ny hametraka azy amin'ny fomba hafa fa tsy ny Mandeha ary mahita asa any amin'ny toerana sarotra kokoa toa an'i Singapore, London, ary Paris. Na eo amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny fizahan-tany miaraka amin'ny New York, Hong Kong, Doha, Mumbai.
Ao amin'ny 2018 Dubai ranking tsy azo resahina ao fitomboana ara-toekarena sy fanavaozana fihariana. Ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny mahasarika ny olona iraisam-pirenena. Amin'ny lafiny mitovy, ity Ny tanàna dia toerana nofinofy ho an'ny asa vaovao kalitao sy ny fiainana andavanandro. Ho an'ny asa any UAE. Ny orinasanay dia manoro hevitra asa fitadiavana asa any Dubai ary tranonkala fandraisam-peo ao an-toerana. Tena mendrika ny hampiharina amin'ny CV anao izy ireo.
Fa maninona i Dubai no toerana tsara indrindra miasa ho a mpitantana. satria afaka mahazo asa haingana ianao!.
Tanàna ao Emirà Arabo Mitambatra
Voalohany, ny toerana tsara indrindra dia ny tanàna UAE ho an'ny vaovao nahazo diplaoma ambony sy vaovao tany 2018. Mazava ho azy, Abu Dhabi dia toerana tena tsara ho an'ny fitantanana ny fitantanana, Dubai, ary Sharjah koa no lasa ambony indrindra amin'ireo tanàna tsara indrindra hiaina ao amin'ny Business Business Arabo.
Ao amin'ny 2018 sy 2019 amin'ny fanadihadiana farany Ny expats dia miandraikitra an'i Dubai ho toerana tsara indrindra ho an'ny mpitantana. Ary eo ambanin'ireo toe-javatra ireo rehefa mitady fotoana mahomby amin'ny fitantanana ianao. Ianao dia tokony raiso ho toy ny tsara indrindra eto an-tany ity tanàna ity. Ny filoha lefitra ary, ny chef Executive Officers dia mahazo tolotra tsara kokoa aza. Amin'izany tranga izany dia mety hanana asa tsara kokoa ho an'ny ambaratonga fitantanana ambony, ny mpanatanteraka C-level mahazo fiainana tsara kokoa amin'ny fiainana sy karama lavitra sy mifaninana ampitahaina amin'ny hafa.
Nandritra ny taona maro dia nitady asa be dia be ny mpikaroka solika sy gazy. The Mpikaroka mahavita asa any Dubai toy ny toerana mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao. Ho azy ireo ny asa any Abu Dhabi na Dubai dia tena zavatra tsara indrindra amin'ny asa matihanina.
Etsy ankilany, efa ho ny antsasany mpikatsaka asa avy any India mijery isan'andro noho ny fahafaha-maimaim-poana an'ny solika sy ny gazy 8,000. Ambonin'ireo mpiasa matihanina rehetra ao Dubai dia mila mamaly ny mpiasan'ny mpanafika rehetra. Miaraka amin'izany ao an-tsainao dia mijery foana ny habaka an-tserasera vaovao ho fampahalalana momba ny asa momba ny asa. Ny fandraisana an-tsitrapo tsara indrindra dia nametraka ireo mpandraharaha mpiasan'ny fitaterana an-dalambon'i Dubai teo amin'ny lisitry ny toeram-piasana.
Toeram-pitsangatsanganana any Dubai
Ny tanàna tsara indrindra amin'ny ny planet dia lasa Dubai ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Ny toerana tsara indrindra ho an'ny mpitsidika amin'ny fialan-tsasatra sy toerana mafana amin'ny asa. Misy be ny toerana maro ao an-tanàna. Porofon'izany, ny mpitsidika vaovao no tia an'io toerana io satria ny trano fivarotana lehibe sy miantsena. Fa raha te hahita asa any Dubai ianao dia mila manana asa visa ho. Amin'ny lafiny ratsy, Mila mahafantatra ny fomba hahitana asa ianao.
The Lehiben'ny Dubai nanova ny faritra iray manontolo avy amin'ny Governemanta kely ka nisy orinasa lehibe. Nifindra tany Dubai avy any an-tany foana mankany amin'ny iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eto ambonin'ny planeta. Ny ankabeazan'ireo toerana mahasarika sy aleha dia mitondra bebe kokoa mpitsidika any UAE. Tsy vitan'ny hoe afaka misotro rano ianao fa afaka mitady fividianana varotra.
Any amin'ny Emirates, tsara tarehy ny masoandro. Amin'izay fotoana izay ihany, ny Emirà Arabo Mitambatra dia toerana tsara indrindra ho an'ny fialambolin'ny fianakaviana. Ny renivohitry ny UAE dia toerana malaza ho mpitsoa-ponenana. Tian'ny olona ity toerana ity amin'ny toerana mahaliana toy ny Burj Khalifa. Ary izany no fomba ofisialy avo indrindra eran-tany amin'ny GCC. Fa na izany aza, dia mety ho zava-dehibe ho an'ny fianakavianao ny toerana. Ohatra ny lazan'ny toeram-pivarotana Dubai.
Ny Dubai mahafinaritra anay dia tonga lafatra amin'ny olona rehetra. Azonao atao ny misafidy endrika mahaliana anao aquariums mammoth sy kianja filalaovana ski anatiny. Mba hametrahana azy amin'ny fomba iray hafa, ity tanàna ity dia manana ny zava-bitan'ny kolontsaina maro ho an'ireo mpitsidika sy mpihaza. Misy zavatra maro azo hatao amin'ny Emirates. The fiara eto amin'ity toerana ity no tena mamirapiratra sy manana fividianana maoderina.
Dubai no toerana tsara indrindra ho an'ny asa, miezaka ny hahazo asa ho Expat.
Ny governemanta Emirates ihany koa manohana ireo vahiny any Dubai amin'ny fikarohana asa. Mpiondrika any Emirates dia te-hahazo sy mandany ny volany solika ao anatin'ny Dubai mahagaga sy Abu Dhabi. Ireo mpanentana talenta manerantany dia mandray foana any Emirates. Orinasa marobe any Dubai no miara-miasa amin'ny Singapore, New York, ary ny orinasan'ny orinasa any London.
Orinasa fandraisana mpiasa ho an'ny mpitarika toa an'i Adecco, Bayt ary GulfTalent sy ny maro hafa. Mitondra ny UAE mialoha ny firenen-kafa ho an'ny asa fanarenana. The Ny asa tsara indrindra dia any amin'ny sehatra solika. Izany no mahatonga ny toe-karena any amin'ireo firenena any amin'ny Golfa sy ny Afovoany Atsinanana ho toy ny faritra NoXXX mba hahasarika mpanatanteraka vaovao. Ny talenta tsara indrindra mitady ny orinasa any UAE. Ary any no azonao Mahaiza manerantany amin'ny maha-vehivavy maneran-tany.
Amin'ny ankapobeny ny fitadiavana asa sasany dia mety ho gaga. Tsy izany ihany Voatendry ho toerana tsara indrindra hiasa ao UAE i Dubai. Miaraka ho an'ny Shariah sy Abu Dhabi ihany koa ny isa. Global asa mitady azo alaina rehefa ianao mipetraka any amin'ny orinasa Emirates sy Arabia Saodita.
Any aoriana, ireo mpitarika fandraharahana ao Dubai City sy ireo mpanapa-kevitra fototra no olo-manan-kaja amin'ny resaka fitantanana ny harena voajanahary. Ho an'ny ankamaroan'ny asa, ireo mpitsikera dia manaiky ny fahavitrihan'ity firenena ity. Ny mpiasa mpanafika dia mitarika mpitsoa-ponenana maro hisafidy an'i Dubai sy Abou Dhabi ho toeram-ponenana, miasa ary mandray am-pahavitrihana ny fiainany amin'ny tontolon'ny asa Arabo.
Fa maninona i Dubai no toerana tsara indrindra miasa? Satria ny ankamaroan'ny Expats dia mahazo asa any.
Torohevitra amin'ny fitadiavana asa any UAE
Mandritra ireo toe-javatra ireo dia ireo mpikatsaka asa Raha tokony ho tranonkala serivisy. Fidio ireo tranonkala karakaraina karama. Satria raha nisy olona niasa ao Dubai ho an'ny 10 taona. Manana fahafahana bebe kokoa amin'ny asa any amin'ny tsenan'ny asa any Emirates. Tsy mahagaga raha izy ireo Azo antoka fa hahita asa any Emirà Arabo Mitambatra ho Pakistaney mpitsoa-ponenana. Na ny toerana misy ny toerana toy ny PDG sy talen'ny fitantanana (MG). Na vondrona MBC sy Filohan'ny fikambanana Insead Alumni any UAE.
Ho an'ny ankamaroan'ny asa, ireo mpiasa ireo dia nahavita asa maromaro maromaro. ary Miasa any UAE izy ireo isan-taona. Amin'izany fotoana izany dia mihabetsaka hatrany ny mpikaroka avy any India mijanona mandritra ny fotoana maharitra any Emirates. Ny fientanentan'ny tsenan'ny injeniera dia manasa olona maro kokoa isan-taona. Manome ny toerana misy azy rehetra ho an'ny mpanatanteraka iraisam-pirenena i Dubai City. Ity tanàna Arabo mahagaga ity dia mitambatra tsara asa mahatalanjona sy fomba fiaina mahatalanjona ho an'ny olona maro.
Tany Emirates, amin'ny ankapobeny, dia misy maro fotoana mahaliana ao 2020. Nanjary be mpitia ny asa any Dubai ary nanangana asa miaraka amin'ny orinasa maro ao amin'ny Resume anao. Mila manana ianao nanomboka tamin'ny traikefa avo lenta tao UAE. Ny orinasa tsara indrindra eto Dubai dia orinasa iraisam-pirenena. Aiza no misy anao mametraka traikefa lava be any Moyen-Orient.
Yousuf Almulla ilay Lehiben'ny paikady ambony indrindra ao Dubai Fihazonana, Ilay olona fototra ao amin'ny Dubai Business iza no UAE nasionalista ary EMBA alumnus. Niresaka foana tamin'ny resadresaka nifanaovan'izy ireo momba ny valin'ny sidina UAE. Ny asa any UAE dia tena mahafa-po ho an'ny mpitantana sy ny mpanatanteraka. UAE no firenena ho an'ny mpitady asa nasionaly ary mpihaza asa an-tery. Ny fokonolona hatrany miakatra hahazoana izany fankatoavana izany.
Tsy mora ny mitady asa any Dubai
Raha ny zava-misy, ny fanapahan-kevitry ny orinasa Dubai City dia manapa-kevitra ny hisakafo amin'ny serivisy manokana. Ary etsy ankilany dia isika manampy ireo mpikatsaka asa any amin'ny firenena Golfa toa an'i Qatar sy Arabia Saodita. Hatramin'ny 2009 dia mitantana fangatahana asa hitadiavana asa izahay. Ao amin'ny fanantenana fa Mpampiasa asa an-terivozona dia hahita asa vaovao any Qatar na Saudi Arabia.
Etsy ankilany, ny Company Dubai City dia lasa asa toerana tsara indrindra ary Tsia ny mpandraharaha momba ny asa ao1 any UAE. Ka ny mpikaroka asa tsirairay dia afaka mampiditra CV Dubai Jobs. Ny asa amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny Moyen Orient dia sarotra ny mahazo. Ary fantatry ny rehetra. Saingy miaraka amin'ny drafitra fitantanana media sosialy dia ho mora kokoa ny hahazoana izany. Rehefa ianao manomboka mivarotra ny tenanao amin'ny tsenan'ny asa UAE Afaka mahita asa mora ianao ao Dubai City.
Tamin'izany fotoana izany, maro Ireo mpikaroka asa dia mamoaka CV amin'ny tranokalantsika miaraka amin'ny traikefa MBA. Ary tamin'ity tranga ity dia nahita asa tany Dubai. Zava-dehibe ny mahatsapa raha mitady karatra any UAE ianao. Ampiasao ny serivisy ary azafady haingana ny asa ampiasao ny fizarana Upload Resume anay. Amin'ny lafiny tsara raha mitady asa fitantanana ianao. Manome ny Ny asa fitadiavana asa tsara indrindra any UAE. Tokony hampakatra ny fandaharam-pampianarana amin'ny solontenantsika any amin'ny Company Company Dubai.
Nahoana Dubai no toerana tsara indrindra amin'ny asa sy ny expats vaovao?. Satria ny olona mitantana asa any UAE.
Alefaso ny famerenana ho amin'ny asa any Dubai
Manampy ny mpitady asa fa tsy any UAE ihany ny Orinasa City. Manampy ihany koa izahay hahazo asa any Qatar, Saudi Arabia, ary Egypt. Etsy ankilany, izahay dia iray amin'ny tranonkala asa tsara indrindra any Moyen-Orient. Ao an-tsaina izany, ny mpikaroka karama dia afaka mampiditra ilay fandaharam-potoana amin'ny Dubai City Company. Ny fandaminana ataontsika fitantanana asa ao an-trano. Ny mpikaroka rehetra dia afaka manome ny Curriculum Vitae. Espaniola maso iraisam-pirenena ho an'ny Indiana. Ary orinasa fandaharam-pikarakarana asa fitoriana any Dubai sy Abu Dhabi. Tena hiasa tsara ho anao izany.
Ankoatra izany, ny mpikaroka rehetra avy any India sy Pakistan dia mametraka ny Resume. Hisy safidy vitsivitsy hisafidianana. Mpanafatra avy amin'ny tsena iraisam-pirenena afaka mametraka vita dia mahomby. Ny fomba tsara indrindra dia ny fampidirana CV amin'ny mpandraharaha fandraisana mpiasa ary orinasa HR. Ny fomba faran'izay saina dia ny haka ny safidy fampidinana premium ary mahita asa any UAE. Ary aminao, ho mpihaza asa sy expat amin'ny asa dia fomba tsara indrindra amin'ny fikarohana momba ny fomba fiaina vaovao.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny porofo avy amin'ny orinasa Dubai City Company. Ny mpikaroka rehetra dia afaka mahazo asa tsara karama ao Abu Dhabi. Noho izany antony izany, ireo mpikaroka amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny dia afaka mahita asa amin'ny fampiasana ny Company Dubai City.
Fa maninona i Dubai no toerana tsara indrindra ho an'ny asa sy ny asanao?. Mpanatanteraka fitantanana asa be karama any UAE.
Mpikaroka Indiana sy Pakistaney
Ny fandaminantsika dia manampy ireo mpikaroka asa avy any Inde sy Pakistan. Ny olona rehetra izay manoratra ny fangatahana asa. Mazava tsara, raiso a asa fitadiavana asa. Amin'izay dia afaka mifandray izy ireo maso, loham-pianakaviana, talen'ny fitantanana any Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Jordania ary Egypt. koa jereo ny torolàlana momba ny resort any Emirates United Arab.
Ny orinasa Dubai City no masoivoho tsara indrindra ao Emirà Arabo Mitambatra. Mba hametrahana izany fomba hafa izany, dia isika manampy ny mpihaza rehetra sy mpihaza amin'ny fametrahana azy ireo any UAE. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo vahoaka iraisam-pirenena izay te hanao ho avy amin'ny asan'ny banky. Maninona i Dubai no toerana tsara indrindra miasa tahaka ny Indiana ary Pakistane?. Ny olona mahazo visa ho an'ny asa any UAE. Amin'ny fomba haingana.
Etsy ankilany, hahatsiaro voavonjy any Dubai ianao. polisy dia mahagaga tokoa any Dubai sy Abu Dhabi.
Koa raha mitady asa any Dubai ianao?
Dubai no toerana tsara indrindra hiasa amin'ny maha-mpialokaloka azy ?. Ireo mpikatroka mpiasa mitady asa any UAE.
Ankehitriny manana ny rehetra ianao fampahalalana momba ny fiainana any UAE. Tokony hanandrana tokoa isika asa fitadiavana asa ho an'ny hotely. Ny orinasantsika any Dubai dia fikambanana tena tsara sy manao ny marina. Manampy amin'ny fahazoana asa izahay Dubai company ary mahazo asa haingana amin'ny asa any amin'ny United Arab Emirates.
Izany hoe, iray isika ny mpamatsy fampahalalana momba ny fomba fiaina tsara indrindra any Dubai ao 2019 ary manantena ny orinasa tsara indrindra amin'ny ho avy 2020. Ny ekipanay dia mikaroka ny vaovao farany momba ny fikarakarana ary manaparitaka izany amin'ny momba izany Blog ao Dubai. Hevi-dehibe iray raha mitady ny asa ianao ary lany daty ianao dia mampakatra resadresaka ho an'ireo orinasa ambony izay mipetraka ao Dubai City.
Ny orinasa Dubai City dia orinasa tsara indrindra ho an'ny mpikaroka amin'ny asa fitadiavana. Ka raha manana traikefa amin'ny fandraharahana tahaka ny C-Level isika dia afaka manome anao fahafahana mahagaga momba ny asa ao Dubai. Ny tranokalan'ny asa fitantanana ny asa fitadiavana mpitantana mpanatanteraka ao anatiny sy ivelan'i Dubai ho an'ireo mpitantana ambony.
Ny mpikaroka rehetra dia tokony Diniho ny tanànan'i Dubai ho an'ny asa vaovao. Emirates dia ny toerana tsara indrindra ho an'ny vahiny sy ny Google miasa. Dubai no toerana tsara indrindra ho an'ny asa Ampidiro ny CV amin'ny orinasa.
Dubai no toerana tsara indrindra hiasa amin'ny maha-mpitsoa-ponenana
Mitadiava asa any Dubai City!
Famerenana ho an'ny asa any UAE
Find a Fampahalalana misimisy kokoa momba an'i Dubai? Mahagaga fa afaka mahazo izany ianao. Manomboha fotsiny vaovao asa amin'ny Dubai!
Afeno ny famerenana Ho any Amin'ny Tanàna Manan-dampana Lavitra Indrindra! - Dubai City.